सरकारमाथि राजेन्द्र महतोले लगाए गम्भीर आरोप, सीके राउतसँग विशेष कनेक्सन ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
सरकारमाथि राजेन्द्र महतोले लगाए गम्भीर आरोप, सीके राउतसँग विशेष कनेक्सन !
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, अशोज ५, २०७५
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय राजेन्द्र महतो र अनिल झा ३ दिन कैलाली र कञ्चनपुरमा बिताएर फर्के । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आएका उनीहरु संविधानको विरोध कार्यक्रम, राजनीतिक भेटघाट, कैलाली कारागारमा रहेका कैदीबन्दी संग भेटवार्ता गरी राजधानी फर्केका हुन् । यहाँको बसाईमा उनीहरुले स‌ंघीय सरकारकाे कडा अालाेचना गर्नुका साथै विखण्डनकारी नारा लगाइरहेका सीके राउतकाे भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाए ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महताेले संघीय सरकार र सीके राउतबीच विशेष कनेक्सन रहेकाे अाराेप समेत लगाए ।
‘हामी पहिचानवादी हौ । प्रान्तीय प्रणालीबाट मुलुक समृद्ध बन्छ भन्ने मान्यता राख्छौ । तर हाम्रो एजेण्डालाई असफल पारेपछि कसको एजेण्डा बलियो हुन्छ ? जसले अर्को देश मागिरहेको उसको एजेण्डा नै बलियो हुन्छ नि,’ धनगढीमा विहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महताेले भने, ‘हामीलाई असफल पार्ने काम राज्यले गरिरहेको छ । मुलुकलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने काम राज्यले गरिरहेको छ ।’
आफूहरु राज्यको सफल संघीयताको प्रयासमा हातेमालो गर्न खोजेको बताउँदै महताेले त्यहि अनुसारको संरचना, अधिकार र व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग समेत गरे । ‘हामी त नेपालको सोभरेन्टीभित्र अधिकार सम्पन्न भएर बस्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर राज्यले बनाइरहेको छैन’, उनले अगाडी थपे, ‘हामी त असफल होउला तर हामीलाई असफल बनाएर राज्यलाई नै असफल बनाइरहेको छ । यसमा विखण्डनकारीहरुलाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।’
महताेले स‌ंविधान स‌ंशाेधन र मधेस अान्दाेलनका क्रममा लगाइका मुद्दा फिर्ताकाे विषयमा पर्ख र हेरकाे अवस्थामा रहेकाे पनि बताए ।
‘हामीले यो सरकारलाई समर्थन पनि गरेका छौ । तर सदुपयोग भएन । संविधान संशोधन, कैदीबन्दी रिहाईलगायत माग राखी हामीले समर्थन गरेका हौ । हालसम्म हामी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौ’, नेता महतोले भने । कञ्चनपुरको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणलगायत घटनालाई कोट्याउँदै उनले मुलुकमा राज्यबाटै आतंक सिर्जना समेत भएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिल झाले मधेस तथा थारूको माग सम्बोधन गर्ने आशका कारण आफूहरुले वर्तमान सरकारको समर्थन गरेको जिकिर गरे । ‘सरकारले इमान्दारिता देखायो भने संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने, ‘अहिले संसदमा पनि हामी नरम भएका छौँ, जब सरकारले सुन्दैन संसद पनि गरम हुन्छ र त्यस्तै अवस्था आए सडक पनि गरम हुनेछ ।’ lokaantar बाट